Vagari vachichera mvura muguta reHarare, Zimbabwe, July 30, 2019.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose.
Nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Josephat Chiripanyanga, vanoti vari kusangana nevanhu vakawandisa vari kuuya kuzorapwa manyoka kubasa kwavo uye vari kukurudzira vabereki kuti vakaona mwana mucheche aakuita manyoka aya vanofanirwa kukurumidza kumuendesa kuchipatara.
Dr Chiripanyanga vanoti vanhu vave kuitira tsvina musango nepamusana pekushaya mvura muzvimbuzi zvemumba zvinova zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera zvirwere zvemanyoka.
Kanzuru yeHarare iri kukurudzira vagari vemuguta kuti vafashaidze mvura yokunwa kana kuirapa nemishonga inowanikwa kumakiriniki ekanzuru zviri pachena kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chemanyoka.
Mutauri wekanzuru yeHarare, Va Michael Chideme, vanoti kunyange hazvo vasina huhwandu hwevanhu vari kurapwa manyoka mumakiriniki ese ekanzuru yeHarare, vanhu vakawanda vari kunzi vari kuuya kumakiriki nedambudziko remanyoka iwaya.
VaChideme vanoti nyika haina kuwana mvura yakawanda mwaka wapfuura nokudaro vanhu vave kuchera mvura mumatsime ane mvura ine tsvina.
VaChideme vanoti mvura yese ngaifashaidzwe kana kuiswa mishonga inouraya hutachiwana hwemumvura isati yanwiwa kana kubikisa zvokudya.
Asi VaChideme vari kukurudzira munhu wese anenge abatwa nemanyoka kuti aende kumakiriniki ekanzuru ese zvawo kuitira kuti anorapwa pachena nekukurumidza.
Meya weHarare, VaHerbert Gomba, vanoti kanzuru yeHarare ine chirongwa chokutenga matangi makumi maviri achaiswa mvura ichaendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana muguta reHarare dziri kunyanyanya kushaya mvura yakachena.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano, uye vari nhengo yesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Norman Matara, vanoti vagari vemuguta ngavaomesewo nyama sezvinoitwa kumaruwa sezvo mafiriji asiri kushanda nemazvo nekuda kwemagetsi ari kudzimwa dzimwa.
Doctor Matara vanoti chikafu chisina kutonhoreswa zvakanaka chinobatira zvirwere zvakawanda zvinokonzera kuti vanhu varware nemanyoka kana kurwadziwa zvakaipisisa nemudumbu.
VaMatara vanoti nyama yehuku, yemombe kana yenguruve isina kubikwa zvakanaka, kana zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuchengetedzwa zvakanaka mumafiriji, zvinorwarisa mudumbu.
Tsvagurudzo yakaitwa nekanzuru yeHarare yakaburitsa humbowo hwekuti manyoka aya haasi ekorera kana kuti Typhoid muvanhu makumi mashanu vakaongororwa kuma kiriniki ekanzuru ekuGlenView, Glen Norah neBudiriro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rehutano, Dr Portia Manangazira, kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara zvehurumende maererano nezvirwere zvemanyoka.